Varidzi vezvivakwa Kutengesa uye Kubhadhara mu Oklahoma
Real Estate Listings: Real Estate Agent Directory Property Managers Oklahoma
Maneja wepfuma kana maneja wemupfumi munhu kana kambani inopihwa basa rekushandisa zvivakwa zvekutengesa zvivakwa, kana muridzi wacho akatadza kunyatsoteerera kune izvi, kana asingafarire kuzviita. Iyo midziyo inogona kuve yega yemusoro inomiririra kana inogona kuve iri pasi pechikamu chechikamu, share block kambani iri yavo uye inogona kunyoreswa kwekugara, yekutengesa hofisi uye kutengesa kana kushandiswa kwemaindasitiri. Kufanana mabasa anotarisirwa maneja wepfuma kunosanganisira kutsvaga / kudzinga uye kazhinji kubata nevaridzi uye kubatana nezvido zvemuridzi. Gadziriro dzakadaro dzinogona kuda kuti maneja wepfuma atore mutero, uye abhadhare mari yakadikanwa uye mutero, achigadzira mishumo yenguva nenguva kuna iye muridzi, kana iye muridzi angangopa mamwe mabasa nekubata nevamwe zvakananga. Maneja wepfuma angaronga mabasa akasiyana siyana, sekukumbirwa kunga kunga kwakaitwa nemuridzi wemuridzi, wemubhadharo. Iko kwekugara (imba yekutandarira, imba yechipiri) ichingogarwa nguva nenguva, maneja wepfuma angaronga kuongororwa kwekuchengetedza kuchengetedzwa, kugara-imba, kuchengetwa uye kutumira kwezvinhu, uye kumwe kudzvinyirira kwenzvimbo kunokosha kuti nzvimbo yacho igadzikane kana iye muridzi. iri munogara (zvekushandisa, masisitimu anoshanda, zvekupa uye vashandi vari paruoko, nezvimwewo). Kutonga kwezvinhu kunogona zvakare kusanganisa zvivakwa zvekutengesa uko maneja wepfuma angashandira bhizinesi, pamwe nekutonga nzvimbo. Dzimwe hutongi dzingada kuti maneja wepfuma atorerwe marezenenzi pabasa iri. Maneja wezvivakwa ane mutoro wekutanga kuna iye muridzi wemba uye wechipiri mutoro kune iyo agency. Hukama iyo maneja wezvivakwa ane iye naiye muridzi wemba uye iye muridzi akakosha mukuumba zvinotarisirwa zvemapato maviri kumubvumirano sezvo mapato acho maviri achatsvaga uye anotarisira mvumo nekwaniso kubva mariri.